Veruzhinji Zvivakwa - China Zhenyuan Simbi Dhizaini Injiniya Co., Ltd.
Iko kurongeka kwenzvimbo, kugadziriswa kwekushanda, kurongeka kwevanhu uye kubuda kwezvivakwa zveveruzhinji, pamwe nekuyera, chimiro uye nharaunda mamiriro (huwandu, chimiro uye mhando) yenzvimbo. Pakati pavo, yakanyanya kutariswa ndeye mhando yekushandiswa kwenzvimbo yekuvaka uye kugadzirisa mabasa.
Kunyangwe hunhu nemhando yekushandiswa kwezvivakwa zvakasiyana zveveruzhinji zvakasiyana, zvinogona kuganhurwa muzvikamu zvitatu: chikuru chinoshandisa chikamu, chikamu chechipiri chekushandisa (kana chikamu chekubatsira) uye chikamu chekubatanidza traffic. Mukugadzirwa, isu tinofanirwa kutanga tanzwisisa hukama hwezvikamu zvitatu izvi pakurongeka nekubatanidzwa, uye kugadzirisa zvinopesana zvakasiyana rimwe nerimwe kuti tiwane kurongeka uye kukwana kwehukama hunoshanda. Muhukama hwezvikamu zvitatu izvi, kugoverwa kwenzvimbo yekubatanidza traffic kazhinji kunotora chinzvimbo chakakosha.
Chikamu chekubatanidza traffic chinogona kuve chakakamurwa kuita matatu mafomu enzvimbo: yakatwasuka traffic, yakamira traffic uye hub traffic.
Pfungwa Dzakakosha Dzakarongeka Traffic Layout:
Inofanirwa kuve yakatwasuka, kudzivirira kumonyorora uye kutendeuka, kuve yakanyatso hukama nechikamu chimwe nechimwe chedenga, uye kuve nani masikati machena uye magetsi. Semuenzaniso, nzira yekufamba.
Pfungwa Dzakakosha dzeVertical Traffic Layout:
Iyo nzvimbo uye huwandu zvinoenderana nezvinodiwa zvinoshanda uye nezvinodiwa nemoto. Ichave padyo nenzvimbo yekufambisa, yakaenzana yakarongedzwa neyekutanga uye yechipiri mapoinzi, uye inokodzera huwandu hwevashandisi.
Pfungwa Dzakakosha dzeKufambisa Hub Kurongwa:
Ichave nyore kushandisa, yakakodzera muchadenga, inonzwisisika muchimiro, yakakodzera mukushongedza, ine hupfumi uye inoshanda. Zvese zviri zviviri basa rekushandisa uye kugadzirwa kwenzvimbo kwehunyanzvi kubata kunozotarisirwa.
Mukugadzirwa kwezvivakwa zveveruzhinji, tichifunga kugoverwa kwevanhu, shanduko yenzira, shanduko yenzvimbo uye kubatana nematanho, masitepisi uye dzimwe nzvimbo, zvinodikanwa kuronga horo uye dzimwe nzira dzenzvimbo yekutamba chinzvimbo chekufambisa hub uye nzvimbo shanduko.
Dhizaini yemusuwo uye yekubuda kweiyo yekupinda horo inowanzoenderana nezvinodiwa zviviri: imwe ndizvo zvinodiwa zvekushandisa, uye imwe yacho ndizvo zvinodiwa pakugadziriswa kwenzvimbo.
Inoshanda Zoning yeZveruzhinji Zvivakwa:
Pfungwa yekugadzirisa magariro ndeyekuisa nzvimbo zvichienderana nezvinodiwa zvakasiyana zvekushanda, uye kuzvisanganisa nekuzvipatsanura zvinoenderana nehukama hwehukama hwavo.
Mitemo yekukamurwa kwemashandiro ndeiyi: kujekesa kujeka, kusangana kwakaringana, uye kurongeka kunonzwisisika maererano nehukama pakati pezvakakura, zvechipiri, zvemukati, zvekunze, zvine ruzha nerunyararo, zvekuti yega yega ine nzvimbo yayo; Panguva imwecheteyo, zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo zvekushandisa, nzvimbo yacho ichave yakarongedzwa zvinoenderana nemitezo yevanhu vanoyerera zviitiko. Iko kusanganiswa uye kupatsanurwa kwenzvimbo kunotora iyo huru nzvimbo seyepakati, uye kurongeka kwenzvimbo yechipiri kuchave kunobatsira pakuedza kweiyo huru nzvimbo basa. Iyo nzvimbo yekutaurirana kwekunze ichave iri padhuze nehubhu yekufambisa, uye nzvimbo yekushandisa kwemukati ichave yakavanzwa. Kubatana uye kupatsanurwa kwenzvimbo kuchabatwa nemazvo pahwaro hwekuongorora kwakadzama.
Kubuda kwevanhu muzvivakwa zveveruzhinji:
Kubuda kwevanhu kunogona kuve kwakakamurwa kuita zvakajairika uye zve emergency mamiriro. Kubuda kwakajairika kunogona kuve kwakakamurwa kuita kuenderera (semuenzaniso mashopu), pakati (eg masheatre) uye zvakasanganiswa (semuenzaniso dzimba dzekuratidzira). Emergency evacuation iri pakati.
Kubviswa kwevanhu muzvivakwa zveruzhinji kuchave kwakatsetseka. Kuiswa kwenzvimbo yebhafa pane iyo hub kunozotarisirwa, uye kunogona kunyatsopararira pazvinenge zvakakodzera kudzivirira kuwandisa kwakanyanya. Nezve zviitiko zvinoenderera, zvakakodzera kuseta mabudiro uye huwandu hwevanhu zvakasiyana. Zvinoenderana nekodhi yekudzivirira moto, nguva yekubuda inozotariswa zvakakwana uye huwandu hwemotokari huchaverengerwa.
Iko kuisirwa kwehuwandu, fomu uye mhando yeimwe nzvimbo:
Saizi, kugona, chimiro, kuvhenekera, kufefetedza, kupenya kwezuva, tembiricha, hunyoro uye zvimwewo mamiriro enzvimbo imwe chete ndizvo zvakakosha zvekukodzera, uye zvakare akakosha ematambudziko ekuvaka basa, ayo anozotariswa zvakazara mukugadzirwa.
Zvivakwa zveveruzhinji zvinosanganisira zvivakwa zvehofisi, mahofisi edhipatimendi rehurumende, nezvimwe. Zvivakwa zvekutengesa (senge nzvimbo dzekutengesera uye zvivakwa zvemari), zvivakwa zvevashanyi (senge mahotera nenzvimbo dzevaraidzo), sainzi, fundo, tsika nemagariro zvehutano (kusanganisira tsika, dzidzo, kutsvagisa kwesainzi, kurapwa, hutano, zvivakwa zvemitambo, nezvimwewo), zvivakwa zvekutaurirana (senge mbiru uye nharembozha, kutaurirana, nzvimbo yedata nemakamuri enhepfenyuro), zvivakwa zvekufambisa (senge nhandare, zviteshi zvechitima zvinomhanya kwazvo, zviteshi zvezvitima, subways uye zviteshi zvebhazi) nezvimwe